Saturday January 12, 2019 - 23:21:28 in Wararka by Halgan News
, kaas oo lagaga jawaabaayey warqad qoraal ah oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland hore ugu soo diray Golaha , taas oo lagu doonaayey in ay waajibaadkooda ka gutaan dib u dhaca ku yimid Doorashooyinkii Golaha Wakiiladda iyo Degaanka .
Fadhigan maanta baaqday ayaa la filayaa in uu qabsoomo maalinta Berri ah oo ku began maalin Axad ah , waxaana la filayaa in ay Golaha Guurtida Somaliland fadhigoodaasi kaga hadlaan muddo kordhin loo sameeyo labadaasi Gole ee Degaanka iyo Wakiiladda oo doorashooyinkoodu dib u dhaceen dhawr jeer .
Warar hoose ayaa sheegaaya in ay Goluhu diyaarinayaan in ay sameeyaan muddo kordhin dhan laba sanno , taas oo ay u samaynayaan labadan Gole oo muddo dhaaf ah , lana filaayey in doorashadoodu sannadkii ina dhaafay dhacdo laakiin aanay surto gelin.
Haddii ay suurtowdo in ay Golaha Guurtidu labadan Gole u sameeyaan muddo kordhin laba sanno ahwaxa meesha ka bixi doona qoddobadii ay dhowaan ku heshiiyeen xisbiyadda siyaasadda ee UCID iyo KULMIYE , kuwaas oo dhigaayey in lagu heshiiyey in doorashooyinkaasi dhacaan sannadkan 2019-ka daba yaaqadiisa .
Qoddobadan ay soo saareen labada xisbi ee UCID iyo KULMIYE ayuu ka maqnaa xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI , iyada oo uu jiro khilaaf balaadhan oo u dhexeeya xisbiyadda UCID iyo KULMIYE oo isku dhinac ah iyo xisbiga WADDANI oo isna dhinac ah, kaas oo salka ku haya Guddida Doorashooyinka.
Waxa maalinta berri shacabku u dheg taagayaa sida uu u dhaco kulanka ay isugu iman doonaan Golaha Guurtida Somaliland oo sannadihii ugu dambeeyey noqday Golaha Muddokordhinta .